Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Reverse Engineering » Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial]
1 Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 22nd October 2009, 1:01 pm
လူသစ်တန်း ခရက်ကာများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကျနော် ခရက်လုပ်ပြမယ့်နည်းကတော့ Program ရဲ့ Registration Bytes ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ ခရက်လုပ်တဲ့နည်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနည်းကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ဟာ အချိန်ကုန်တအားသက်သာစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနည်းဟာ Programmer အများစုသုံးတဲ့နည်းလည်းဖြစ်လို့ Cracking ရဲ့ အခြေခံ Concept လို့ ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
ကျနော်ပြောချင်တာ တစ်ခုကတော့ Cracking ဆိုတဲ့ ပညာရပ်ဟာ သူများလုပ်ပြတာကို ကြည့်ရုံ ၊ နားထောင်ရုံ နဲ့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
ကျနော် လုပ်ပြသွားတဲ့ အတိုင်းကို ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ကြည့်နေမှ တကယ်တတ်မှာပါ။ နို့မို့ဆိုရင် စာဖတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ အဆင့်ကနေ တတ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း
Tutorial by $ƴǩǾ
ကျနော်သုံးထားတာကတော့ WinRAR 3.80 beta5Version ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့ Program တွေကတော့ :: WinRAR, Olly Debug, hex editor တို့ဖြစ်ပါတယ်။
1.) ကျနော်တို့ရဲ့ WinRAR.exe ဖိုင်ကို Olly Debug နဲ့ ဖွင့်ပါမယ်။
2.) OLLY ထဲရောက်ရင် ထဲမှာ Right click နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Search For > All Referenced Text strings ဆိုပြီးတော့ ရှာပါမယ်။
အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ Reference window ထဲကိုရောက်ပါမယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ EXE ဖိုင်ထဲမှာ ပါသမျှ Text အားလုံးကို သူတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ address တွေနဲ့ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ အောက်ကို scroll ဆွဲပြီးသွားလိုက်ရင်တော့ string တစ်ခုကို အောက်နားမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ "RARKEY" (သို့) "RARREG.KEY" ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ရှာတွေ့ရင် double click လုပ်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ အဲဒီ့ text ရဲ့ instruction point ကိုရောပါမယ်။ (ဒါကတော့ ကျနော်နဲ့ ခရက်တဲ့ Version မတူတဲ့သူတွေလည်း လုပ်ရမယ့် အဆင့်ပါ။)
3.) အောက်မှာကတော့ program run ရင် လာမယ့် Registration Process ဖြစ်ပါတယ်။
00440CC7 . E8 FC8C0600 CALL
00440CCC . 33C0 XOR EAX,EAX < just Clearing EAX register for registration process
00440CCE . E8 ADA60400 CALL RegistrationProc@.0048B380 <**CALL TO Registration Check proc, to see if registered.
00440CD3 . A2 F4B84B00 MOV BYTE PTR DS:[4BB8F4],AL <** THE Registration Byte (to check if its registered or not)
00440CD8 . 33C0 XOR EAX,EAX
REGISTRATION BYTE ရဲ့ သဘောတရားကတော့ 1 ဖြစ်ရင် program က registered ဖြစ်ပါမယ် ၊0ဖြစ်နေရင်တော့ program က NOT Registered ဖြစ်ပါတယ်။
Program က Registration Proc ကို စလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ သူက Program ဟာ Registered လား Trial လားဆိုတာ စစ်ပါတယ်။
0048B380 55 PUSH EBP MOV DWORD PTR FS:,EDX
0048B3B9 . E9 57010000 JMP WinRAR.0048B515
0048B3BE > 8D8D E4EEFFFF LEA ECX,DWORD PTR SS:[EBP-111C];Just Checking if Registry Keys Exsist.. blah..
0048B3C4 . BA B8684B00 MOV EDX, .004B68B8; ASCII "Software\_WinRAR"
0048B3C9 . 51 PUSH ECX
0048B3CA . 6A 00 PUSH 0
0048B3CC . 68 FF0F0000 PUSH 0FFF
0048B3D1 . B9 C8684B00 MOV ECX, .004B68C8; |ASCII "rarkey"
4.) REGISTRATION CHECK ကို ခေါ်ခြင်း နှင့် Registration BYTE အား စစ်ခြင်း
00440CD3 . A2 F4B84B00 MOV BYTE PTR DS:[4BB8F4],AL <** Registration Byte address
ကျနော်တို့ဟာ CALL RegistrationProc ဆိုတာကို MOV EAX,1 ဆိုပြီးတော့ patch လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲလိုလုပ်တာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပရိုဂရမ်ဟာ တခြားနေရာတွေကနေလည်း အဲဒီ့ Call the Registration Proc ဆိုတာကို ဆက်လက်စစ်ဆေးနေနိုင်သေးလို့ပါ။
MOV BYTE PTR DS:[4BB8F4],AL ဆိုတဲ့ instruction မှာတော့ Registration byte Address ဖြစ်တဲ့[4BB8F4] ရှိပါတယ်။ အကယ်လို့သာ [4BB8F4] မှာရှိတဲ့ byte ရဲ့ value ဟာ 0, ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ registered မဟုတ်သေးပါဘူး။
ဒီ ဖန်ရှင်ဟာ AL BYTE ကို address [4BB8F4] ဆီကို ပြောင်းပေးတဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
အဲဒီ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့လုပ်ရမှာက MOV AL,1 ဆိုတာကို Registration Check Proc စတဲ့အချိန်မှာ ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ program ဟာ Registered ဖြစ်သွားပါပြီ။
(AL register ဆိုတာကတော့ EAX register ရဲ့ 16bit version လို့မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။)
5.) ကျနော်တို့စပြီးတော့ Program ကို Patch လုပ်ပါတော့မယ်။
အောက်ကကုဒ်ကို ရှာပါ။ ပြီးရင်
REGISTRATION PROC: ( 00440CCE CALL RegistrationProc@.0048B380 )
0048B380 55 PUSH EBP <***Registration Check Proc Start
0048B381 8BEC MOV EBP,ESP
0048B383 81C4 04F0FFFF ADD ESP,-0FFC
0048B389 . 50 PUSH EAX
0048B38A . 81C4 E4FEFFFF ADD ESP,-11C
0048B380 B0 01 MOV AL,1 <***Registration Check Proc Start
0048B382 C3 RETN <** Immediately Return
ဒီ ကုဒ်ကတော့ AL (EAX) = 1 ကို 1 အနေနဲ့ ထားပြီးတော့ code တစ်ခုကို return ပြန်ပါတယ်။ registration check code ကို ကျနော်တို့ နည်းနည်းမှ မထိလိုက်ရဘဲနဲ့ Registration Check Proc မှာတင်စစ်သွားတာပါ။
ပြီးရင်တော့ Program ကို ပြန်ပြီး patch လုက်လိုက်ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ REGISTERED! Version ကိုရပြီပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ winrar 3.0 အထက် version အားလုံးကို ဒီနည်းနဲ့ ခရက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Code နည်းနည်းတော့ ပြောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Registration byte method ကိုသုံးပြီးခရက်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။ ဒီ Concept နဲ့ တခြားဘယ် program မျိုးမှာ မဆို ဟက်လို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခြေခံအကျဆုံး concept ဖြစ်လို့ပါ။
(နောက်တစ်ခု လက်ဆောင်အဖြစ် ကျနော်ပြောပြပါဦးမယ်။ ကျနော်တို့ RAR နဲ့ ဖိုင်တွေကို ချုံ့မယ်ဆိုပါတော့ ချုံ့တဲ့အခါမှာ Authenticity Verification ဆိုတာကို ကျနော်တုိ့ ထည့်မယ်ဆိုရင် " Only Availible in Registered Version." ဆိုတာကြီး ကျလာတာ မုန်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ကျော်လို့ရပါတယ်။ အောက်က ကုဒ် တွေကို ရအောင်ရှာပါ။ ပြီးရင် "ဒီလိုင်းကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။" ဆိုတဲ့ လိုင်းကို ဖျက်လိုက်ရုံပါဘဲ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.])
0044765D |. E8 2A290600 CALL ; \_IsDlgButtonChecked
00447662 |. 85C0 TEST EAX,EAX
00447664 |. 74 11 JE SHORT .00447677 < ဒီလိုင်းကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ :)
00447666 |. 8BC3 MOV EAX,EBX
00447668 |. E8 4B9B0300 CALL .004811B8 < Send unregistered message
0044766D |. 6A 00 PUSH 0
ဒီ Tutorial မှာ ကျနော် ပြောသွားတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ကျနော်တို့ ခရက်ကင်းလောကမှာ အသုံးအများဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျူတိုရီရယ်တွေလည်း အများကြီးပါ။
ဒီ Tutorial ကို သေချာနားလည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အစ်ကို ၊ အစ်မတို့ အနေနဲ့ ခရက်ကင်းလောကရဲ့ အဓိကကျတဲ့ concept တစ်ခုကို ရသွားပြီဆိုတာ ကျနော် အာမခံရဲပါတယ်ဗျာ။
လောလောဆယ်တော့ ကျနော်သုံးနေတဲ့ ဆိုင်က RAR က Register Version ဖြစ်သွားပြီ။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒီကျူတိုရီရယ်ကို ကျနော်ရေးရတာကတော့ educational purpose တစ်ခုထဲအတွက်ရေးတာပါ။ မြန်မာတွေ Cracking ကို စိတ်ဝင်စားလာဖို့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့လည်း ရေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Tutorial ကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါက ဖိုရမ်ကို Credit ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
2 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 23rd October 2009, 9:29 am
ကျနော်တို့ရဲ့ WinRAR.exe ဖိုင်ကို Olly Debug နဲ့ ဖွင့်ပါမယ်။
3 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 23rd October 2009, 12:52 pm
ဟဲ့ကဲ့ Install လုပ်ပြီးသားလေ။
ကျနော်တို့ RAR ရဲ့ မူရင်း Install လုပ်ထားတဲ့ Directory ထဲကို သွားပြီးဖွင့်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။
ကို rhythm လို ကျနော်ကတော့ မဖွင့်ခင် PEiD နဲ့ စစ်တာ အကျင့်မဖြစ်သေးဘူး။ တစ်ခါတည်း dbg နဲ့ တန်းဖွင့်တာအကျင့်ဖြစ်နေလို့။
4 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 23rd October 2009, 3:00 pm
5 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 14th November 2009, 10:47 am
ဒါကတော့ နောက်တစ်နည်းနဲ့ crack လုပ်ခြင်းပါ။ WinRAR 3.8 beta4နဲ့ စမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
CMP BYTE PTR DS:[4xxxxx],0 ; NOP ဖြင့် အစားထိုးပါ။
JNZ SHORT WinRAR.004xxxxx ; NOP ဖြင့် အစားထိုးပါ။
CMP BYTE PTR DS:[4xxxxx],0
JNZ SHORT WinRAR.004xxxxx
LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-554]
MOV EDX,WinRAR.004xxxxx ; ASCII "rarkey"
JE SHORT WinRAR.004xxxxx
MOV EAX,DWORD PTR DS:[4xxxxx]
CMP EAX,28 ; အချို့ version များတွင် DWORD PTR DS:[4xxxxx], 28 ဟု ပြောင်းနိုင်သည်။
JG SHORT WinRAR.004xxxxx
JGE SHORT WinRAR.004 xxxxx
MOV BYTE PTR DS:[4xxxxx],1
PUSH0; lParam = NULL
PUSH WinRAR.004xxxxx ; DlgProc = WinRAR.0044618C
PUSH DWORD PTR DS:[4xxxxx] ; hOwner = NULL
PUSH WinRAR.004xxxxx ; pTemplate = "REMINDER"
PUSH DWORD PTR DS:[4xxxxx] ; hInst = NULL
CALL <JMP.&USER32.DialogBoxParamA> ; DialogBoxParamA API
Disassembly window မှာ Ctrl + F (Search for - Command) နှိပ်ပြီး MOV ECX,6ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ။
CMP ????, 28 နားတွင် (သို့) DialogBoxParamA API နားတွင် ရပ်ပါ။
ထို့နောက် ကုဒ်များကို အောက်ပါအတိုင်းပြောင်းပါ။
JMP SHORT WinRAR.00441CC9
ထို့နောက် ပြင်ထားသောကုဒ်များကို သိမ်းဆည်းပါ။ (Copy to executable -> All Modifications)
(၃) WinRAR ကို Resource Hacker ဖြင့်ဖွင့်ပြီး String Table ရဲ့ 55 tree က 873, "evaluation copy" ကိုတွေ့သောအခါ
"evaluation copy" နေရာတွင် "Licensed Version" ဟုပြောင်းပါ။
Dialog Tree ရဲ့ AboutRARDLG အောက်က "40 days trial copy" နေရာမှာ "Cracked by Myanmar Cracking Team" လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် register
C:\_Program Files\_WinRAR directory အောက်မှာ RARREG.KEY ဖိုင်ကို notepad နဲ့ ဖန်တီးပြီး အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ပါ။
Myanmar Cracking Team
ဒါဆိုရင် WinRAR ရဲ့ Help menu က About ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ပထမအကြိမ်မှာ Cracked by Myanmar Cracking Team လို့
ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် About menu ကိုထပ်ရွေးတဲ့အခါမှာ Registered to: Myanmar Cracking Team လို့ ပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီလိုလုပ်ရမှာပျင်းရင်တော့ crack လုပ်ထားပြီးသားဖိုင်ကို အစားထိုးလိုက်ရုံပါပဲ။
Crack လုပ်ထားပြီးသားဖိုင်ကို အောက်ပါ link မှာ download လုပ်ယူပြီး မူရင်းဖိုင်တွေနဲ့ အစားထိုးပါ။
ဖိုင်ကိုတော့ အောက်ပါ link မှာ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Last edited by N@Y Y!N3 on 18th November 2009, 6:49 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ် ခံခြင်း)
6 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 17th November 2009, 3:58 pm
WinRAR 3.9 Supporting Patch File
Last edited by N@Y Y!N3 on 18th November 2009, 6:50 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ် ခံခြင်း)
7 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 19th November 2009, 5:39 pm
ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို ကျူတိုရီရယ်လေးတွေ တစ်ပတ်ကို ၁ ခုလောက် နိုင်သလောက်လေး လုပ်ပေးပါဦး။
ခရက်ပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ Knowledge ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
8 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial] on 21st November 2009, 12:21 pm
Support WinRAR 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 Patch ဖိုင်
error ရှိရင် အကြောင်းပြန်ပေးကြပါ။ Theme/Template ပဲ ပြောင်းထားတာပါ။ အပေါ်ဖိုင်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
9 Re: Registration Byte Patch Method ကို အသုံးပြု၍ Crack လုပ်ခြင်း [Tutorial]